Filler dia afaka mampiasa fitaovana - Azo atao ny mameno fanenitra mba hamenoana ny vilany miaraka amin'ny volavolan-tseranana, fametahana, na karazana vokatra hafa. Ny famenoana famolavolana dia afaka atao amin'ny fomba maro samihafa mba hamaritana ny habetsaky ny vokatra ho feno, anisan'izany ny famolahana ny pistôlany, ny famenoana rano, ary ny pocket. Izy ireo dia mitovitovy amin'ny fiasa amin'ny ranon-tsakafo sy ny vovoka amin'ny fahasamihafana lehibe indrindra izay ahafahana manangona azy ireo manokana amin'ny famokarana bozaka raha ny fahosana sy ny vovoantitra dia natao mba handaminana ny fitaratra, ny plastika ary ny karazana fitahirizana hafa. Ny piston dia afaka mampiasa azy amin'ny solika Mamaritra ny habetsaky ny vokatra entina hiditra ao amin'ny kanona. Rehefa manamboatra ny pistôla dia mamoaka vokatra avy amin'ny vokatra entina hametrahana ny piston ilay piston. Raha vantany vao feno ilay pistôzy, dia misy valiny fanodinana volom-borona, izay mifehy ny fitarihan-drano sy ny famoahana vokatra avy amin'ny solom-bala, dia haverina mba hialan'ny mpanao pistil dia hamindra ny vokatra avy ao amin'ny pistôl ary ho toy ny can. Raha vantany vao levona ny mpanao pistolina, dia naverina ny valim-panafody ka rehefa voatsangana ilay mpanao pistol dia hamoaka vokatra avy amin'ny fitaovana famokarana vokatra. Ny piston dia azo ampiasaina amin'ny ranon-tsavoka sy ny pasteo.Liquid dia azo anoratana ny herin'ny angovo azo avy amin'ny herin'aratra, satria ny herin'ny rivotra dia mety hampiasa ny tsindry ahafahana mavesatra amin'ny vokatra entina hamenoana ny vokatra ao anaty harona. Ny herin'ny maingoka dia afaka manangona dipoavatra ao anaty lava-batana izay misy ony misy tombo-kase miaraka amin'ny tendrony.
Ny dity ao amin'ny ranon-javatra dia mety hameno azy ary manokatra ny famokarana vokatra avy amin'ny vokatra entona. Raha vantany vao tonga any amin'ny ambaratonga ambony amin'ny seranana famafazana ao anaty fonony ilay fitifirana dia mitovy ny fanerena ambony amin'ny rano ao amin'ny tobim-pamokarana vokatra. Raha vantany vao mitranga izany, dia mitsahatra ny ranon-tsavony ao anaty vatany. Rehefa atsangan'ny kodiarana ny pensilihazo, dia mihidy ny tsatoka mba hisorohana ny vokatra hafa tsy hiditra ao amin'ny kanona.
Nampiditra fikambanana vaovao natao manokana ho an'ny famokarana feno voankazo karbona. Nanova ny valim-pifamoivoizana sy ny diam-pidin'ny lalana izahay ka nahatonga moramora kokoa tamin'ny fivoahana kely. Ny fanafody vaovao dia mifototra amin'ny saran-dalam-pamokarana amin'ny sigara fivoahana gaza ary manidy izay manomboka ny fikorianana rehefa tapitra ny tranokely. Manombantombana momba ny bateria 6 isaky ny minitra miaraka amin'ny ~ 10 fahenoana faharoa (2), ny hafainganana kokoa amin'ny 4).
Ny faneriterena ny tsindry eto an-tanindrazana ho an'ny mpanangom-bokatra, Ity fandaharam-pamokarana ity dia manana tahirin-tsakafo manodidina ny 300 12 oz cans isan'ora. Ity fako tsy manam-paharoa ity dia manana fahafahana manohitra ny fanerena hameno ny bateria, manadio ny boaty miaraka amin'ny CO2 mialoha ny famolavolana fizarana, ary manisy tombo-kase ny bakteria manohitra ny dipoavatra. Ny famenoana dia atsahatra raha vao mahatratra ny haavon'ny haavony. Ny fizotry ny fanamafisana dia manome fahafaham-po kokoa ny ranon-javatra, ny fako kokoa sy ny fatran'ny oksizenina tsizarizary kokoa noho ny fanandramana tsaratsara kokoa sy ny fiainany kokoa.
200L mamba milina famenoana milina
Tranoben'ny famonoana menaka
Tranobe maimaim-poana fanondrahana milina